January 19, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha January 19, 2020
(Barcelona) 20 Jan 2020. Barcelona ayaa guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Granada garoonka Camp Nou, kaddib markii ay kaga adkaatay 1-0, ciyaar ka tirsaneyn kulamada horyaalka La Liga ee dalka Spain. Qeybta hore ayaa lagu kala maray bar-bardhac 0-0 ah. Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay labada dhinac ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad […]Sii akhriso
(Turin) 20 Jan 2020. Juventus ayaa guul ay u baahneyd kaga gaartay kooxda Parma garoonka Allianz, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, kulan ka tirsanaa horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. Qeybta hote ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Juventus. Daqiiqadii 43-aad Juventus ayaa hoggaanka u qabatay […]Sii akhriso
(Barcelona) 19 Jan 2020. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Barcelona Iyo Granada kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka La Liga. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ah ee Barcelona Iyo Granada: Barcelona XI: Granada XI: Gool FM.Sii akhriso
(Liverpool) 19 Jan 2020. Liverpool ayaa wali la qaban yahay kaddib markii ay guul muhiim ee 2-0 ah kaga gaartay kooxda Manchester United garoonka Anfield, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 23-aad ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa Liverpool. Daqiiqadii 14-aad Liverpool ayaa hoggaanka […]Sii akhriso
(Liverpool) 19 Jan 2020. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Liverpool Iyo Manchester United kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka Premier League. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ah ee Liverpool Iyo Manchester United: Liverpool XI: Man United XI: Gool FM.Sii akhriso
Taliyaha Ciidanka dhulka oo Booqday difaacyada dagaalka ee Gobolka Shabeellada Hoose+Sawirro
Soomaaliya January 19, 2020
Muqdisho.(SONNA):- Taliyaha Ciidanka Dhulka ee Xoogga Dalka Soomaaliya S/guudto C/Xamiid Maxamed Dirir ayaa Kormeer shaqo waxa uu ku tagay Difaacyada Ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin Degaanada Awdheegle,Bariire,Sabiid iyo Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellada Hoose. General C/Xamiid Maxamed Dirir ayaa mid mid u dul istaagay Difaacyada isagoona halkaasi kula kulmay Sii akhriso
(Turin) 19 Jan 2020. Cristiano Ronaldo ayaa doonaya inuu sii wado bandhigiisa cajiibka ah uu ka sameynayo kooxda Juventus, isla markaana uu rikoodh cusub ah ka jebiyo halyeeyga reer France ee Michel Platini. Ronaldo ayaa isku diyaarinayaa inuu hoggaamiyo weerarka kooxda Juventus kulanka ay caawa kula ciyaari doonaan naadiga Parma horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. […]Sii akhriso
DDS January 19, 2020
Waxaa maanta Hutel Harmony ee caasimada dalka lagu qabtey kulan lagu gorfeynaayey barnaamij siyaasadeedka iyo xeer hoosaadka xisbiga barwaaqada (PP) qaybta Soomaalida, waxaana soo qaban qaabiyey madaxda xisbiga ee heer federal iyo kuwa caaamisada Addis Ababa, Shirkan ayaa gaar u ah Soomaalida ku dhaqan caasimada. Waxaa ka soo qayb galey kulankaas dooda ahaa wasiirka Sii akhriso
(Madrid) 19 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa halkeeda ka sii waday taxanaheeda guuldarro la’aanta ah iyadoo uu hoggaaminayo macalinka reer France ee Zinedine Zidane. Real Madrid ayaa xalay guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Sevilla garoonka Santiago Bernabeu, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 20-aad ee horyaalka La Liga […]Sii akhriso
Somali FM to Asharq Al-Awsat: Biggest Supporter of Somalia is Saudi Arabia – Asharq Al-awsat English
Somali News January 19, 2020
Somali FM to Asharq Al-Awsat: Biggest Supporter of Somalia is Saudi Arabia Asharq Al-awsat EnglishSii akhriso